Inhalation Injury (အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Inhalation Injury (အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်း)
Inhalation Injury (အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာတွင် သေဆုံးရခြင်း၏ အကြောင်းများအနက် လောင်ကျွမ်းရာမှ ထွက်လာသည့် မီးခိုးငွေ့ရှုမိခြင်းကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ပြီး သေဆုံးခြင်းသည် အများဆုံးဖြစ်သည်။
အပူကြောင့် ပစ္စည်းများလျှင်မြန်စွာ လာင်ကျွမ်းခြင်းကို မီးလောင်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ မီးခိုးငွေ့ ဆိုသည်မှာ အပူကြောင့်ဖြစ်သော အမှုန်များနှင့် ဓါတ်ငွေ့များပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မီးခိုးငွေ့တွင် ပါဝင်သော အမှုန်များကို မျက်စိနှင့် မမြင်နိုင်ပါ။ ပစ္စည်များ အပူနှင့် ထိတွေ့ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အရာများနှင့် လေထဲမှအောက်ဆီဂျင်များ သည်မီးလောင်သော အခါ မီးခိုးငွေ့ အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
Inhalation Injury (အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မီးလောင်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးရသူများ၏ ၅၀- ၈၀ % သည် မီးလောင်နာကြောင့် သေဆုံးခြင်းထက် မီးခိုးငွေ့များကို ရှုမိခြင်းကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးခြင်းပိုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။
Inhalation Injury (အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါ လက္ခဏာများစွာရှိပါသည်။ တွေ့ရများသော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ အသံသြလာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း နှင့် စိတ်အခြေအနေများ ပြောင်းလဲခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းတွင် ကျပ်ခိုးများတွေ့ခြင်း၊ အသားရောင်များပြောင်းလဲသွားခြင်းတိုကကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်မှု အတိုင်းအတာကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းတွင် ရှိသော ချွဲအလွှာများကို ထိခိုက်မိခြင်းကြောင့် ချွဲများကို ပိုထွက်စေပါသည်။ လည်ချောင်းကြွင်သားများ လှုပ်ရှားမှုမမှန်ခြင်းကလည်း ချွဲထွက်စေပြီး ချောင်းဆိုးစေပါသည်။
ချွဲသည် အကြည်ရောင် ဖြစ်နိုင်သလို မီးလောင်ရာတွင် သင့်အဆုတ်ထဲသို့ရှုမိသော မီးခိုးမှုန်များအပေါ်မူတည်ပြီး အမည်းရောင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ယင်းသည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီး ထိုသို့ဖြစ်လျှင် သွေးထဲသို့ အောက်ဆီဂျင်သယ်ယူမှု နည်းသွားနိုင်ပါသည်။ မီးခိုးငွေ့များထဲတွင်ပါသော ဓါတုပစ္စည်းများကြောင့် သွေးဆဲလ်များသည်လည်း အောက်ဆီဂျင်သယ်ယူနိုင်သော ပမာဏ နည်းသွားပါသည်။ ထိုကြောင့် အသက်ရငကျပ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
အသံသြခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှုသံကျယ်ခြင်း
ယင်းသည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း အထက်ပိုင်းတွင် အရည်များစုအိုင်ပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိတ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဓါတုပစ္စည်းများက အသံကြိုးကို ထိခိုက်ခြင်း ကြောင့် အသံကြိုး မတုန်ခါနိုင်ခြင်း၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း အထက်ပိုင်းတွင် ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ကျဉ်းသွားခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။
မီးခိုးငွေ့များကြောင့် မျက်လုံးများ နီရဲလာခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ မျက်ကြည်လွှာ လောင်ကျွမ်းခြင်းများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မီးခိုးငွေ့ထဲတွင် ပါဝင်သော ဓါတုပစ္စည်းများ အပေါ်မူတည်ပြီး သင့် အသားရောင်သည် ဖြူဖျော့သွားရာမှ ပြာသွားခြင်း၊ ချယ်ရီပန်းကဲ့သို့ နီသွားခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နှာခေါင်းပေါက်နှင့် လည်ချောင်းများတွင် ကျပ်ခိုးများတွေ့ခြင်းသည် မီးခိုးငွေ့ရှုရှိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော လက္ခဏာဖြစ်ပြီး ထိုနှာခေါင်းပေါက်နှင့် လည်ချောင်းတလျှောက်တွင် ရောင်ရမ်းမှုများကို ဖြစ်စေပါသည်။
မီးလောင်မှု တခုဖြစ်ပွားရာတွင် ကာဗွန်မိုအောက်ဆိုက်ဓါတ်ငွေ့များကို အများအပြားရှုမိကြသည်။ ထိုသူများသည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ အပြင်ကာဗွန်မိုအောက်ဆိုက်ဓါတ်ငွေ့ အဆိပ်သင့်ခြင်းကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မီးခိုးငွေ့များတွင် ပါဝင်သောဓါတုဗေဒပစ္စည်းများ နှင့် သွေးထဲတွင် အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်နည်းပါးသွားစေခြင်းကြောင့် စိတ်အာရုံရှုပ်ထွေးခြင်း၊ မူးခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ သတိမေ့ခြင်း စသည့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ခံစားရနိုင်ပါသည်။
Inhalation Injury (အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ေသောအခါ ပုံမှန်အားဖြင့် မွန်းကျပ်ခြင်း၊ ဓါတု သို့မဟုတ် အပူကြောင့် ထိခိုက်ခြင်း၊ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများကြောင့် မွန်းကျပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အထက်ပါဖြစ်စဉ်များပေါင်းစပ်နေခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သာမန်အားဖြင့် အသက်ရှုကျပ်စေသော အရာများ
မီးလောင်သော အခါ လေထဲမှ အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ကို ယူသုံးလိုက်ခြင်းကြောင့် လေထဲတွင်ရှုစရာ အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ခြင်းဖြစ်ကာ သေဆုံးရခြင်းဖြစ်သည်။
မီးခိုးငွေ့၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝသည် လူကို အန္တရာယ် မဖြစ်စေသော်လည်း လေထဲရှိအောက်ဆီဂျင်ကို မီးလောင်ငွေ့များက ယူသုံးလိုက်ခြင်းကြောင့် အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်များ မလုံလောက်ကာ သေဆုံးရခြင်းဖြစ်သည်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓါတ်ငွေ့သည် လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်ဖြစ်သည်။
မီးလောင်ခြင်းဖြင့် သင့်အရေပြားနှင့် ချွဲလွှာများကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေသော ဓါတုပစ္စည်းများ ထွက်လာပါသည်။ ယင်းတို့သည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရှိ သဘာဝချွဲ အမြှေးများကို ပျက်စီးစေသောကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း၊ လေအိတ်လေးများ ပြားခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ- မီးခိုးမှုန်များတွင်ပါဝင်သော sulfur dioxide, ammonia, hydrogen chloride စသည့်ဓါတုပစ္စည်းများကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အပူချိန်မြင့်မားသော မီးလောင်မှုများကြောင့်လည်း အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။
မီးလောင်ခြင်းကြောင့် ထွက်ရှိလာသော Carbon monoxide, hydrogen cyanide, hydrogen sulfide စသည့်ဓါတ်ပေါင်းများကြောင့် အောက်ဆီဂျင်ကို သွေးထဲရှိ ဆဲလ်များကယူမသုံးနိုင်တော့အောင် ဖြစ်စေပါသည်။
ထိုအခါဆဲလ်များသည် အောက်ဆီဂျင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ သေဆုံးသွားရသည်။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာတွင် သေဆုံးရခြင်း၏ အကြောင်းများအနက် လောင်ကျွမ်းရာမှ ထွက်လာသည့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓါတ်ငွေ့ရှုမိခြင်းကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ပြီး သေဆုံးခြင်းသည် အများဆုံးဖြစ်သည်။
Inhalation Injury (အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဆေးလိပ် အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်း ကို ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံး အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
Inhalation Injury (အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါလက္ခဏာများ ပြင်းထန်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ချက်ချင်းစစ်ဆေးသင့်သည်များ ကို ဆရာဝန်က ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။
အဆက်မပြတ်ချောင်းဆိုးနေခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်ခြင်း တို့ဖြစ်လျှင် ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ သင့်တွင်ရောဂါလက္ခဏာများ ပြင်းထန်နေသောလည်း ပထမဆုံးစစ်ဆေးသော ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက် တွင် မည်သည့်ထိခိုက်မှုမျှ မတွေ့ရသည်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော် အချိန်ကြာသွားမှ အဆုတ်ထိခိုက်သော လက္ခဏာများသည် ဓါတ်မှန်တွင် ပေါ်လာနိုင်သည့်အတွက် စောင့်ကြည့်ကာလအတွင်း ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ကို ထပ်ရိုက်ပြီး စစ်ဆေးသင့်သည်။
သွေးထဲတွင်ရှိသော အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို တိုင်းတာသည့် စက်ကလေးကို လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်းထိပ်များ နှင့် နားထိပ်တွင် တပ်ပြီးတိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် သွေးပေါင်ကျနေသော အနေအထားမျိုးတွင် မူ သွေးကြောများထဲတွင် သွေးလုံလောက်စွာမရှိခြင်းကြောင့် ထိုစက်နှင့် သွေးထဲရှိအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို တိုင်းရာတွင် မှန်ကန်မှုမရှိနိုင်ပါ။
သွေးဥရေအနည်းအများကို စစ်ခြင်း၊ သွေးပြန်ကြောထဲရှိ ဓါတ်များကို စစ်ဆေးခြင်း၊ သွေးထဲရှိ carboxyhemoglobin နှင့် methemoglobin ဓါတ်များကို စစ်ဆေးခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Inhalation Injury (အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရှေးဦးစွာ လူနာကို မီးခိုးငွေ့များနှင့် ဝေးရာ သန့်ရှင်းသော လေရှိရာဆီသို့ပြောင်းရွှေ့ပါ။ မီးလောင်ပြင်ထဲသို့ရောက်နေသော သူများကို အပြင်မဆွဲထုတ်မီ သင့်ကိုယ်သင်လည်း အန ္တရာယ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် ထိုသို့ ကယ်ဆယ်ရန် မစွမ်းသာပါက အခင်းဖြစ်ရာသို့ စနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားသော မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လာသည်အထိစောင့်ဆိုင်းပါ။
ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများရောက်မလာမီ တွင် အရေးပေါ်အသက်ကယ်ခြင်းပညာများ တတ်မြောက်သူများက လိုအပ်လျှင် လိအပ်သလို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
လူနာ၏ အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှုများစွာကို လိုအပ်သလို လုပ်ဆောင်ရပါသည်။
အောက်ဆီဂျင်သည် အဓိကကျသော ကုသမှုထဲတွင် ပါဝင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ကို နှာခေါင်းပိုက် ၊ နှာခေါင်းအုပ် သို့မဟုတ် လည်ချောင်းထဲ ထည့်ရသော ပြွန်ချောင်းဖြင့် နည်းအမျိုးမျိုးပေးနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် အသံပြာနေသော သူများအတွက် အောက်ဆီဂျင်ကို ပြွန်ချောင်းဖြင့်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဆရာဝန်သည် လည်ချောင်းထဲသို့ ပြွန်ချောင်းထဲ့ခြင်းဖြင် လေလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် ပိတ်သွားခြင်းမျိုးကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည်။
ထိုအချိန်တွင် လူနာသည် အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ စိတ်အခြေအနေမူမမှန်ခြင်းများဖြစ်လာလျှင် အနီးရှိတာဝန်ရှိသူများက လူနာကို အသက်ရှုအောင်လုပ်ခြင်း၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းတွင် ပိတ်ဆို့နေသည့် အရိအချွဲများကိုစုပ်ထုတ်ခြင်း နှင့် အစားအိမ်ထဲမှ အစာဟောင်များ အသက် ရှုလမ်းကြောင်းထဲသို့ ပြန်မတက်လာရန် လုပ်ခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်ရပါသည်။
အဆုတ်လေပြွန်များထဲသို့ မှန်ပြောင်းငယ်ဖြင့် ကြည့်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းများထဲခိုက်မှု ပမာဏနှင့် ယင်းတွင် ပိတ်ဆို့နေသော အရာများရှိပါက စုပ်ယူထုတ်ရန် လိုမလို သိနိုင်ပါသည်။
လူနာသည် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ်သင့်နေသော အခါ ဖိအားမြှင့် အောက်ဆီဂျင်ပေးနိုင်သည်။ ဖိအားမြှင့် အောက်ဆီဂျင်ပေးခြင်းသည် အောက်ဆီဂျင်ကို အိုးများထဲတွင်ဖိအားသုံးပြီး ထဲ့ထားသော အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့များဖြစ်ပါသည်။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်သူများအတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ။
မီးခိုးငွေ့အာရုံခံစနစ်များကို အခန်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသင့်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မီးခိုးထွက်နေသောနေရာကို စောလျင်စွာ သိနိုင်ပြီး ဘေးကင်းရာသို့ လျင်မြန်စွာရွှေ့ပြောင်းချိန်ရနိုင်ပါသည်။
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အာရုံခံကိရိယာများကို လည်း မီးပြင်းဖို၊ ကားဂိုဒေါင်ကဲ့သို့သော ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်နှင့် ထိတွေ့နေသောနေရာများတွင် တပ်ဆင်ထားသင့်သည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့လျှင် ထွက်ပြေးရမည့်လမ်းကြောင်းများနှင့် မည်သို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်အောင်ပြုလုပ်ရမည်ကို သင်တန်းများပေးခြင်း မှန်မှန်လေ့ကျင်ြ့ခင်းတို့ကို ပြုလုပ်သင့်သည်။
အရေးပေါ်အထွက်ခေါ်ဆိုရမည့် ရဲ၊ မီးသတ်ဌာနနှင့် ဗဟိုတည်နေရာများကို ဆက်သွယ်နိုင်မည့် နေရာများကို မြင်သာသောနေရာများတွင် ကပ်ထားသင့်သည်။ ထို့ပြင် မိမိနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက် တည်နေရာများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှ တဆင့်ရှာဖွေနိုင်သည်။
Inhalation injury.https://medlineplus.gov/inhalationinjuries.html.Accessed December 13, 2016.
Inhalation injury.http://www.webmd.com/lung/smoke_inhalation_treatment_firstaid.htm?print=true#0. Accessed December 13, 2016.
Inhalation injury.https://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_inhalation. Accessed December 13, 2016.